अनलाईन शिक्षाको प्रभावकारीता – Mission
अनलाईन शिक्षाको प्रभावकारीता
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज २७, २०७७
यो २१ औं शताब्दीको समय हो । यो समयमा विज्ञान तथा प्रविधिले विश्वमा आफनो प्रभुत्व जमाएको छ । आज विज्ञानको कारण विश्वमा आफनो पहुंच तथा वर्चस्व कायम गरेका मुुलुकहरुले आफूहरु विश्वमा विकसित भएको अहंकार तथा दम्भ छ । किनकि उनीहरुले आपूmलाई अब्बलता गराउँदै तथा देखाउँदै आएका छन् । औषधि होस् वा व्यापारका मालसमान तथा पेटृोलियम पदार्थ होस् वा अन्ने कुनै चिजवस्तुको उत्पादन गरेर आर्थिकरुपमा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राज्यमा वर्चस्व कायम गरेका छन् ।
जहाँ विश्वका २० प्रतिशत मानिसले ८० प्रतिशत मानिसहरुलाई आफ्नो मूठ्ठीभित्र पारेको अवस्था छ । सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनबाट फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड —१९ले जब विश्वमा महामारीको रुप लिएको छ । धेरै मानिसमा संक्रमण फैलिएको अवस्था छ । यो रोगबाट हाल विश्वमा १० लाख बढि मानिसको मृत्यु भईसकेका घटनाहरु दिन प्रति दिन सञ्चार माध्यामबाट सुन्न पाइन्छ । विकसित देशले २० औं शताब्दिको अन्त्य एवम् कतिपयले २१ औं शताब्दि संगसगै घरमा ज्ञान प्राप्त गर्ने वातावरको सिर्जना गरेको पाइन्छ । पठनपाठनको सवालमा धेरै देशहरु अनलाइनको माध्यबाट पठन पाठन लगायत सबै कामहरुलाई अनलाईनको माभ्याम बाटकाम गरिरहेका छन््।
हाम्रो देशमा काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले सन् २०१३ देखि अनलाईन कक्षाको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । वि.स. २०७४ सालमा स्थापीत खुल्ला विश्वविद्यलयको स्थापना भएसगैं अनलाईनको माध्यामबाट धेरै जनशक्तिले यस विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिलको अध्ययन गरिसकेकाछन् । उक्त विश्वविद्यालयको अवधारणा नै नियमित रुपमा प्रत्येक दिन हाजिरी भएर अध्ययन गर्न नसक्ने जनशक्तिलाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ कोनीति तथा कार्यक्रममा अनलाईन शिक्षाको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने काम समेत सरकारले गरेको छ । उता विश्वविद्यालयको छाता संगठन ग्न्ऋ ले आलाईन पठनपाठनको लागि ४७ करोड रकम छुट्याएको अवस्था छ । हाल नेपालका हरेक विश्वविद्यालयले अनलाईनको माध्याम बाट पठन पाठनगर्ने काम समेत गरेका छन् । पछिल्लो समयमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तर रुपमा अनलाईनको माध्यम बाट अगाडी बढाइरहेको छ ।
आज विश्वका विकसित हुन् वा अल्पविकसित एवम् विकासोन्मुख देशहरुमा कोभिड १९ ले भयावहको स्थिति ल्याउंदा विश्वमा करोडौं विद्यार्थीको भविश्य तथा शिक्षाको पहुंच बाट बन्चित हुने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । हाम्रो देशका ११ वटा विश्वविद्यालयले पनि हरेक तहको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन । हाल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले भाद्र २० गते भित्र आफना सबै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा चालिस पूर्णाङ्कको मध्यावधि परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त परीक्षामा झन्डै ९५ प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागीता रहेको थियो । यो दर प्रत्यक्ष परीक्षा प्रणाली भन्दा झन्डै १० प्रतिशतले बढि देखिन्छ । परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरु पनि दुर्गम जिल्ला त्यो पनि कर्णालीका मुगु, कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, सल्यान तथा दैलेख, सुर्खेत, रोल्पा, दाङ, डोटी, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने विद्यार्थी रहेका थिए । कोभिड १९ को कारण मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफना कतिपय तहका पठनपनठन सम्पन्न गरिसकेको छ । कतिपय सम्पन्न गर्ने जमर्काे गरेको छ । सबै तहको मध्यावधि परीक्षा सम्पन्न गरेर नतिजा प्रकाशन समेत गरेको छ यस विश्वविद्यालयले मिति २०७७ आश्विन १७ गतेदेखि स्नातक सातौ तथा स्नातकोत्तर तेश्रो सेमेष्टरको अन्तिम सत्रान्त परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस परीक्षामा ९९ प्रतिशत विद्यार्थीको सहभागीता छ । जस अन्र्तगत विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका शतप्रतिशत विद्यार्थीको सहभागीता भएको छ । यस विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरु बांके, बर्दिया, रुकुमपश्चिम, जाजारकोट, कालिकोट, मुगु, रोल्पा लगायत सुर्खेतका ३ स्थान गुमी, विद्यापुर र विरेन्द्रनगरमा रहेका छन् । काठमाण्डौंमा पनि यसको सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन् । यी सबै ठाउंमा परीक्षाकेन्द्र रहेका छन् । परीक्षामा यसरी भौतिक रुपमा सञ्चालन हुने परीक्षामा पनि सहभागिता भएको थिएन । भौतिक रुपमा सञ्चालन गरिएका परीक्षामा भने ९० प्रतिशत मात्र हुने अवस्था थियो । त्यसकारण पनि पछिल्लो समयमा अनलाईन शिक्षा तथा पठनपाठन लगायत परीक्षा प्रणालीमा प्रभावकारीता देखिएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई तालिम समेत प्रदान गरेर अन्तिम तयारी गरिसकेको छ । गरे के सम्भव छैन र ? सुतेर होइन उठेर काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जागरुक हुनु, चासो राखेर काम गर्ने, जिज्ञासा लाई केलाउने, खाजी गर्ने कामबाट हरेक बाधाहरुलाई चिर्न सकिन्छ । अन्ने विश्वद्यिालय तथा सि.टी.ई. भि.टि ले पनि हाल अनलाईन बाट पढाउन सुरु गरेका छन् ।
अनलाईनको पठन पाठनको अझै गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष पठनपाठनभन्दा सस्तो छ । मुगु तथा कालिकोटको विद्यार्थी सदरमुकाम वा बजारमा आएर बस्नु पर्दा लाग्ने खर्च तथा आउने जाने भाडा कति लाग्दछ त्यो खर्चको २५ प्रतिशत मात्र पैसाले एउटा राम्रो खालको मोबाईल वा ल्याटप किनेर घरमा बसेर रुखो, निख्लो खाएर अभिभावक तथा परिवार संग बसेर घरको काम गर्दै अध्ययन गर्न सकिन्छ । हाल मुगुका नरविर ऐडी स्नातकोत्तर तह एम. एड. मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । त्यस्तै जाजरकोटकी सुमित्रा वलीको, डोल्पाबाट बसन्त डाँगरजीको भनाई पनि त्यस्तै छ । तर उनले परीक्षा पनि दिए । अनलाई कक्षा घरमा बसेर लिएका छन् । उनको भनाई छ प्रत्यक्षभन्दा अनलाईन निकै प्रभावकारी छ । अरु समयमा घरको काम मात्र होईन जागीर पनि त गर्न सकिन्छ । नत्र डेर गर्ने, जागीरमा विदा लिने वातावरण हुन्छ । तर अनलाईन कक्षामा समय पनि धेरै वा दिनभरी दिनु नपर्ने पनि त उनको तर्क छ । उनीहरु त एक प्रतिनिधि पात्र हुन ।
विद्यालय तहमा पनि अनलाईन कक्षा लाई सहजरुपमा लैजान सकिने व्यवस्था छ । यसका लागी आम अभिभावक, स्वयम् विद्यार्थी नतिनियम कर्ता र सबै सरोकारवालाकको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता पर्दछ । नेपालका कैयन विद्यालयले हालको यो महामारीको समयमा अनलाईन कक्षालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरिहेको आधारहरु हामी राज्यको चौथो अंग मिडिया मार्फत सुन्ने गरेका छौं त । विद्यार्थी संघ तथा संगठनले पनि सकारात्मक सोचका साथयो प्रक्रियामा दत्ततित्तका साथ सरकार, स्थानिय निकाय, विद्यालय परिवार तथा आम सरोकारवाला संग गहनताका साथ छलफल गरेर सकारात्मक सहयोग गरेर अगाडी बढ्ने अवस्था आएको छ ।
हाल विशेष ह्यापी ई. लर्निङ प्याकेज शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुका लागी रु ३०० मा २४ जी. बी. र रु ५०० मा ३५ जि. बी. डाटा २८ दिनको लागि हेरक जुम, गुगल मिट, कलासरुम लगायत चलाउनाको लागी नेपाल दुरसञ्चा संस्थानले निकै सस्तो दरमा दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । नेट नचल्ने ठाउंको लागी कक्षा ११, ११ र १२ को लागी पनि लर्निङग् सिम निशुल्क दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यसका लागी सम्बन्धित विद्यार्थीको प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी लिएर दुरसञ्चार कार्यालयमागएर एउटा फारम भरेमा उक्त सिम प्राप्त हुन्छ । जसबाट सजिलै अनलाईन कक्षा लिन सकिने व्यवस्था छ । वा सम्बन्धित विद्यार्थीले आफैघरमा बसेर पनि अनलाईनको माध्याम बाट पनि ८ज्ञद्धद्धज्ञ३ गरि यो प्याके खरिद गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो भन्दा अगाडि सम्बन्धित क्याम्मपस वा विद्यालयबाट सिफारिस लिने व्यवस्था थियो ।
अनलाईन कक्षा यसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
नेपालका सबै विद्यार्थीलाई चाहि कम्प्युटर तथा ल्यापटप निकै सस्तो वा सहुलियत दरमा विक्रि तथा वितरण वा किन बेचको व्यवस्था गर्ने ।
र्थी जी, फोर जी सपोर्ट गर्ने स्मार्ट फोनको व्यवस्था गर्ने ।
सरकारले प्रत्येक लेपालीको घरघरमा वाईफाई सकभर नि शुल्क वा नसके जनताबाट थोरै शुल्क लिएर वाईफाई वा निकै सस्तो सुलभ दरमा डाटाको व्यवस्था गर्ने । जसबाट निश्चित समय होइन अनलिमिटेड सञ्चालन गर्न सहज बनाउने ।
शिक्षकहरुलाई अनलाईन शिक्षणमा दक्ष, तथा अनुभवी बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
शिक्षकहरुलाई टवलेट, ल्यापटप, तथा स्मार्ट फोनको व्यवस्था गर्ने ।
अधिकांश ठाउँमा विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था भएकाले देशका सबै ठाउँमा यो व्यवस्था गर्ने ।
सबैको पहुंच हुनेगरी सर्वसुलभ तथा निकै सस्तो दरमा विद्युतिय सेवालाई स्थाई रुपमा प्रदान गर्ने ।
तत्काल यो सेवाको पहुंच नभएका ठाउंमा सोलारको सहुलियत प्रदान गर्ने ।
पटक पटक वत्ति तथा नेटको लाईन काटिने समस्याको अन्त्य गर्ने ।
सरकारी क्षेत्रबाट नीति नियमहरु तयारगरी प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउने ।
ई लर्निङ् कक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार र समय तालिका तयार गर्ने ।
नेपाली भुगोल,माटो, वातावरण तथा अवस्था सुहाँंदो स्थानिय तथा राष्टिृय पाठ्यक्रम तयार गर्ने ।
सबै विद्यार्थीहरु लाई कम्तिमा पनि ५०० जी बी पेनडृाईभ निशुल्क प्रदान गर्ने ।
स्थान, भुगोल तथा आवश्यकता अनुसार परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।
निष्कर्षमा भन्नु पर्दा अनलाईन शिक्षाको आश्यकता कोभिड १९ को कारण मात्र नभएर २१औ. शताब्दिको आवश्यकता हो । हरेक देशहरुले यसको प्रयोग गरिहेका छन् । नेपालले पनि यसको नीति नियम तयारगरेर कार्यन्वयनमा जानुको विकल्प छैन । यस शिक्षाको कार्यन्वयनका लागि देशले आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गर्दै अबका केहि वर्षमा अनिवार्य वा केहि विकल्पहरु राख्दै जानु पर्ने अवस्था आजको कोभिड १९ ले देखाएको छ । यो भाईरस साम्य भए पनि फेरी फेरी अन्ने यस्ता रोगहरु आउंदैनन भन्न सकिदैन । यसमा नेपाल सरकार, विश्वविद्यालयहरुका सबै पदाधिकारीहरु, विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु, विभिन्न राजनीतिक दल । यसका भातृसंघ संगठनहरु, हरेक संघ संस्था, व्यक्ति, विज्ञ तथा आम सरोकारवाको ध्यान जानु आवश्यक छ । अवका दिनमा अनलाईन शिक्षाको विकल्प छैन । त्यसको लागी सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक पर्दछ । शुभकामना
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज २७, २०७७ 10:14:09 PM |
Posted in विचार, समसामयिक, समाचार
Prevटिभिएसको अपाचे आरटीआर १६० फोर भी सार्वजनिक
Nextमिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिक २०७७-०६-२७